2-Dumar Ah Oo Xanuunka Ebola Ugu Dhintay Dalka Liberia Oo Markii Salaadii Jinaasada Lagu Tukanayay Noolaaday | Hawraar
2-Dumar Ah Oo Xanuunka Ebola Ugu Dhintay Dalka Liberia Oo Markii Salaadii Jinaasada Lagu Tukanayay Noolaaday
Sida ay ku warantay jariirada New Sun ee ka soo baxda caasimadda Liberia Monrovia, labo haween ah oo u dhintay, cudurka Ebola, ayaa wakhti salaadii janaasada lagu tukanayo noolaaday oo ka kacay naxashyadii ay mayd ahaanta u dul yaaleen.
Sida jariiradu sheegtay labadan dumar ah ayaa muddo dhawr iyo toban saacadood ah mid walba, mayd ahayd lana xaqiijiyay inay geeriyoodeen, kuwaas oo habeenimadii ku mayd baryay halkaas, subaxnimadii markii la dhameeyay xabaashooda ee salaadii lagu tukanayana dib u soo noolaaday.
Labadan haweenka ah oo lagu kala magacaabo, Doris Coy oo 60-jir da’deedu tahay iyo Hawa Kebe oo 40-jir ah, waxa ay dhinteen galabnimadii isniineed, waxaana loo diyaariyay xabaashii lagu aasi lahaa, ka dib markii dhakhaatiirtu xaqiijisay in cudurka Ebola uu galaaftay noloshoodi.
Ka dib waxa loo qaaday goobtii loo diyaariyay in lagu aaso, waxaana jamacii galbinayay intii diyaarka u ahayd ay guda galeen, salaadii jinaasada ahayd, taas oo diiniyan waajib ku ah in lagu sii tukado qofka maydka ah, sida diinta Islaamku dhigayso, labadan dumar ahna ay muslimiin ahaayeen sida jariiradu sheegtay.
Markii qaybtii hore ee salaada la marayo ama badhtanka lagaga jiro ayaa mid ka mid ah labadii mayd sidii qof gurigiisa ka toosay oo kale u istaagtay, laakiin haddana dhacday oo kafankii ku duubnaa ay kici kari wayday.
Xaaladaas ayaa jamacii galisay argagax, taas oo sababtay in dad qaar salaadii ka cararaan, laakiin xubno ka mid ah dadkii waayeelka ahaa ayaa markiiba ku qayliyay, waar gabadhu way noolaatay ee cusbitaalka ula carara, laakiin wax yar ka dib ayaa haddana tii kale lafteedu ka kacday jiifkii, waxaana bilaabmay xaalad kala garashadu luntay sida ay jariiradu sheegtay.
Labadan dumar ah ayaa ambulance lagu qaaday, waxaana loola cararay cusbitaal, halkaas oo markii la geeyay xaaladoodu si caadi ah ku soo noqotay, wallow aanay cusbitaalka ka bixin ilaa wali sida warku sheegayo, haddana caafimaadkoodu wuxuu ahaa mid aad u wanaagsan, oo aan laba moodin sidii dad Ebola ku dhacay oo kale.